नेपाल प्रहरी विदेशी अपराधीको सुधार केन्द्र ! - Dainik Nepal
नेपाल प्रहरी विदेशी अपराधीको सुधार केन्द्र !
दैनिक नेपाल २०७६ भदौ २४ गते १२:२३
काठमाडौं, २४ भदौ । हालै मात्र नेपालका बैंकका एटीएम ह्याक गरी रकम झिक्ने चिनियाँ नागरिकसहित ८ जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलाएको छ ।
बैंकका एटीएम कसरी ह्याक भए, यो गिरोहको मूल केन्द्र कहाँ छ भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । यसको निष्कर्शमा पुगेरै छाड्ने प्रहरीको दृढता छ ।
गएको एक बर्षको रेकर्डलाई हेर्ने हो भने समाज सेवाका नाममा बाल यौन दुराचारमा लागेका दर्जन भन्दा बढी विदेशी नागरिक पक्राउ गरिए । तिनलाई कानुनअनुसारको कारबाही प्रक्रियामा पठाइएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले यस्ता बाल यौन दुराचारीलाई पक्राउ गरेको हो । यस्ता अपराधीका विदेशका कुन कुन ठाउँमा कस्ता घटना घटाएका छन् भन्ने अध्ययनका आधारमा पछ्याउँदै पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा सीआईबी सफल देखिएको छ ।
भारतका कुख्यात डाँका धीरेन्द्र यादवदेखि विकिनी किलरका नाममा कुख्याती कमाएका चाल्र्स शोभराजसम्मलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शोभराजले नेपालै पनि अपराध गरेका कारणले यहाँको कानुनअनुसार जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपाल प्रहरीले विदेशी अपराधीलाई सकेसम्म ठेगान लगाएको छ । त्यसैले पनि मंगलबार प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनालले गर्वका साथ भनेका छन्,‘विदेशी अपराधीलाई सुध्रिन मन लागे नेपाल प्रहरीसमक्ष आए हुन्छ ।’
यो भाषणमा मात्र होइन, रेकर्डमा पनि देखिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा ९७ प्रतिशत सफलता हात पारेको प्रहरीको दाबी छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको एक बर्षको प्रतिवेदनमात्र हेर्ने हो भने ७८ प्रतिशत प्रहरी अनुसन्धान सफल भई अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको फैसला, आदेश भएका छन् ।
यसै भित्र पर्छन्, विदेशी अपराधी पनि । जसको ५ बर्षको तथ्यांक केलाउँदा प्रहरी उनीहरूका लागि सुधार केन्द्र नै भएको पुष्टि हुन आउँछ ।
५ वर्षमा ३५ सय विदेशी नागरिक पक्राउ गरिएका छन् । ‘विविध प्रकारका अपराधमा उनीहरू पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । कतिपयलाई विदेश डिपोट पनि गरिएको छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
१ वर्षमा मात्रै कम्तिमा ६ सय विदेशी अभियुक्त÷अपराधीलाई डिपोर्ट गरिएको छ । अहिले पनि नेपाली जेलमा ४१ देशका १२ सय नागरिक विभिन्न अपराधको सजाय भोगीरहेका छन् ।